Fikojakojana lalana : Potehin’ny fanjakana ireo Orinasa Malagasy aman-jatony
vendredi, 05 novembre 2021 18:29
Mitondra faisana ireo Orinasa mpikojakoja lalana. Aman-jatony izy ireo no nanao asam-panjakana, asa efa vita herintaona lasa mahery nefa tsy nahazo vola hatramin’izao, na teo aza ny fitakiana sy fanairana nataon’ireo mpandraharaha tompon’ny Orinasa.
Nisy tsirim-panantenana tamin’ireo mpandraharaha raha nisy tsenan’asam-panjakana vaovao navoakan’ny fanjakana, vatsian’ny « Fonds Routier » vola tamin’ny jona 2021. Tsy vitsy ireo Orinasa nahazo asa vaovao ara-dalàna fikojana lalana, ary efa nanomboka asa tamin’ny tapaky ny volana oktobra 2021 iny, asa tokony haharitra roa volana eo.
Nilatsaka anefa ny filazana ny 27 oktobra 2021 mampiato ny asa rehefa efa natomboka, tsy misy tsenam-panjakana vaovao.
Toy ny sosoa voata-podrano ireo mpandraharaha mpikojakoja lalana nanoloana io fampiatoana asa nataon’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny « Fonds Routier » io, ka kepoka tanteraka.
Vola aman-tapitrisa Ariary no efa tafiditra tamin’ny nanombohana ny asa, nanafarana sy nanakaramana mpiasa sy nividianana ireo fitaovana sy kojakoja ho an’ny asa.
Vokany, misy miakatra tosidrà, tapaka lalandrà ka malemy ampandriana. Noho ny tsy fahazoana vola tamin’ny asa efa vita herintaona lasa dia ampolony ireo Orinasa efa nataon’ny banky lavanty ny fananany toy ny trano, tany, fitaovam-piasana samihafa.
Miantraika amin’ny fahasalamana ny an’ny sasany vesaran’ny adin-tsaina sy ny trosa babena tamin’ireo akora nilaina, ny karaman’ny mpiasa ary koa ny antoka tamin’ny mpampindram-bola.
Tsy vitsy no voarohirohy ara-pitsarana noho ny seky tsy misy anto-bola namitana ny asa. Misy no namoy ny ainy.